Noti saka dia tranokala iray izay nampahafantatra anao hatramin'ny 2012 ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao hikarakarana ny saka anao: aretina, zavatra ilainy, fomba fisafidianana ny sakafony, inona avy ireo aretina mety ho azony, ary maro hafa koa afaka mankafy ny orinasanao mandritra ny taona maro ianao. Arakaraka ny maha-marimarina kokoa.
Ny ekipa fanontana ao amin'ny Noti Gatos dia misy ireto tonian-dahatsoratra manaraka ireto. Raha liana hiara-hiasa aminay ianao dia mila fenoy ity takelaka manaraka ity ary hifandray aminao izahay.
2 Mpanonta taloha
Heveriko fa ny biby mahafinaritra dia saka izay ahafahantsika mianatra zavatra betsaka amin'izy ireo, ary koa amin'ny tenantsika. Voalaza fa tena mahaleo tena ireto feline kely ireto, fa ny tena izy dia mpinamana be sy mpinamana be.
Satria mahatadidy aho dia afaka mihevitra ny tenako ho tia saka. Fantatro tsara izy ireo satria hatramin'ny mbola kely dia nanana saka tao an-trano aho ary nanampy ny saka izay nanana olana ... Tsy afaka mamorona fiainana aho raha tsy misy ny fitiavany sy ny fitiavana tsy misy fepetra! Izaho dia tao amina fanazaran-tena mitohy hatrany hahafahako mianatra bebe kokoa momba azy ireo ary ireo saka izay eo am-pelatanako dia manana fikarakarana tsara indrindra sy ny fitiavako azy ireo indrindra. Noho izany, manantena aho fa afaka mampita ny fahalalako rehetra amin'ny teny ary mahasoa anao izy ireo.
Kolombiana aho izay tia saka, izay tena mahaliana ahy ny fihetsik'izy ireo sy ny fifandraisan'izy ireo amin'ny olona. Izy ireo dia biby manan-tsaina tokoa, ary tsy manirery toa ny ninoany anay.
Azoko lazaina fa ny saka dia mety ho sakaizan'ny olona indrindra. Voahodidin'izy ireo foana izy ireo, manaitra ahy ary gaga amin'ny fahaizany lehibe mampifanaraka azy ary, indrindra ny fitiavana tsy misy fepetra asehon'izy ireo anao. Na eo aza ny tena fisarahana sy ny fanananao laza mahaleo tena dia afaka mianatra zavatra betsaka avy amin'izy ireo foana ianao, raha manam-paharetana mandalina azy ireo ianao.
Mahatsiaro tena te hahafanta-javatra momba ny tontolon'ny saka aho izay mitarika ahy hanadihady sy te hizara ny fahalalako. Ny fahalalana ny toetrany, ny fitenin'ny vatany ary ny fomba fiainany dia zava-dehibe amin'ny fiaraha-miaina tsara.